I-Enthalpy - iKhemistry kunye neFijiki Inkcazo
Inkcazo kunye neMimiselo ye-Enthalpy
I-Enthalpy yipropati ye-thermodynamic yenkqubo. Ingumlinganiselo wamandla angaphakathi adibeneyo kwimveliso yengcinezelo kunye nenani le nkqubo. Ibonisa amandla okwenza umsebenzi ongeyomsebenzi kunye nomthamo wokukhulula ubushushu . I-Enthalpy ichazwa njengeH ; i-enthalpy ethile echazwe njenge h . Iinqununu eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukubonisa inthalpy yiyona nto, ikhalori, okanye iBTU (i-Unit ye-British Body). I-enthalpy kwinkqubo yokuqhuma iqhubeka.
Utshintsho kwi-enthalpy ebalwa kunokuba i-enthalpy, inxenye kuba i-inthalpy yenani le-system ayikwazi ukulinganiswa. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukulinganisa umehluko kwi-enthalpy phakathi kwelinye ilizwe kunye nolunye. Utshintsho lwe-Enthalpy lungabalwa phantsi kweemeko zoxinzelelo oluqhubekayo.
apho i-entenpy, i-E ingamandla yamaphakathi kwenkqubo, i-P ingcinezelo, kwaye iV iv
D H = T u S + P d V
Ubaluleke Kangakanani Ukwenziwa Kwe-Enthalpy?
Ukulinganisa utshintsho kwi-enthalpy kusivumela ukuba sinqume ukuba ngaba ukuphendulwa komsebenzi kwakuphelile (ukushisa okufayo, utshintsho olulungileyo kwi-enthalpy) okanye ngokugqithiseleyo (ukufudumala ukushisa, utshintsho olubi kwi-enthalpy).
Isetyenziselwa ukubala ukushisa kokuphendula kwenkqubo yamachiza.
Utshintsho kwi-enthalpy isetyenziselwa ukulinganisa ukuhamba kwe-calorimetry .
Kulinganiswa ukuphonononga inkqubo yokuqhuma okanye ukunyuka kweJoule-Thomson.
I-Enthalpy isetyenziselwa ukubala amandla amancinci kwicompressor.
Zininzi ezinye i-inthalpy kwi-engineering engineering.
Utshintsho lwe-Enthalpy lwenzeka ngexesha lokutshintsha kwimeko yomcimbi.
Umzekelo Utshintsho kwi-Enthalpy Calculation
Ungasebenzisa ukushisa kwe-fusion yeqhwa kunye nokufudumala kwe-vaporisation yamanzi ukubala utshintsho lwe-enthalpy xa i-ice iyancibilika ibe yintsholongwane kwaye i-liquid ijika ibe ngumphunga.
Ukufudumala kwe-fusion yeqhwa ngu-333 J / g (ithetha ukuba 333 J ibanjwe xa igrama ye-ice melt). Ukufudumala kwe-vaporization yamanzi amanzi kwi-100 ° C ngu-2257 J / g.
Ingxenye kwi: Bala inani lokutshintsha kwi-enthalpy , ΔH, kulezi zimbini iinkqubo.
H 2 O (s) → H 2 O (l); ΔH =?
H 2 O (l) → H 2 O (g); ΔH =?
Icandelo b: Ukusebenzisa ixabiso olibaliweyo, fumana inani legramu leqhwa ungancibilika usebenzisa 0.800 kJ lokushisa.
a.) Ukutshiswa kwe-fusion kunye ne-vaporization kusezinkundleni, ngoko into yokuqala yokuyenza iguqula kwii-kilojoules. Ukusebenzisa itafile yexesha , siyazi ukuba i- moleyi yamanzi (H 2 O) ngu-18.02 g. Ngoko ke:
fusion ΔH = 18.02 gx 333 J / 1 g
ukuxuba ΔH = 6.00 x 10 3 J
ukuxuba ΔH = 6.00 kJ
i-vaporization ΔH = 18.02 gx 2257 J / 1 g
ukuphefumula ΔH = 4.07 x 10 4 J
i-vaporization ΔH = 40.7 kJ
Ngoko, iimpendulo ze-thermochemical ezizalisiweyo ziyi:
H 2 O (s) → H 2 O (l); ΔH = +6.00 kJ
H 2 O (l) → H 2 O (g); ΔH = +40.7 kJ
b.) Ngoku siyazi ukuba:
1 mol H 2 O (s) = 18.02 g H 2 O ( 6 ) ~ 6.00 kJ
Ukusebenzisa le nkalo yokuguqula:
0.800 kJ x 18.02 g ice / 6.00 kJ = 2.40 g i-melted
b.) 2.40 g i-melted
Yintoni Ubunzima Bomoya ku-STP?
Uhlobo lweNkqubo yoNgcaciso
Kutheni i-Cycle Cycle ibalulekile?
Isisombululo Sokusebenza Inkcazo
I-Microliter Definition kunye neMzekelo
Amaqela aSebenzayo Inkcazo
Inombolo ye-ID ye-UN Inkcazo yeekhemikhali
IsiCwangciso seSicelo esisisidlangalaleni sokuPhendwa kweNkcazo ye-Personal Options
Ziziphi iimbuzo ezine ezibuzwe ngexesha lePasika yePasika?
Indlela yokuchonga izihlahla ezinqabileyo ngesinkwa sazo
Isikhokelo soMqala ukuba uchaze ukuba yimali
Kuthetha ntoni? - Iindawo ezihlala kwiindawo zamandulo zaseMesopotamiya
Ukwahlukana phakathi kobuGcisa beZiko, iiZikolo kunye neeMvelelo
Indlela eyahlukeneyo yokuBamba kunye nokuLoba iQela
Ukunceda abafundi baBhale ibali lobumba
Indlela iMithetho yeSikolo ifuthe njani ukufundisa nokuFunda
Yiyiphi iSimboli kaZwelonke saseItali?
Ukucwina kweLusitania kunye nokungena kweMelika kwiMfazwe Yehlabathi I